cusmaan – Page 3 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Apr 30, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Degso Dhuuxa wareysiyada 30-04-2019 …
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Duhurnimo ee Radio Al-furqaan. Halkan Ka Degso War duhur 30-04-2019
Dhageyso Warka Dubaxnimo Ee Radio Al-furqaan.
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Subaxnimo ee Radio Al-furqaan. Halkan Ka Degso War subax 30-04-2019
cusmaan	 Apr 29, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Degso Dhuuxa Wareysiyada 29-04-2019.mp3
cusmaan	 Apr 26, 2019 0
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaana lagu falanqeeyaa arrimaha muhimka ah ee markaa taagan iyadoo laga qeyb galiyo dad aqoon u leh mowduuca amaba xog ogaal u…
Dhagayso Dhuuxa Waraysiayda.
cusmaan	 Apr 23, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Ku Degso Tayo Sare Dhuuxa wareysiyada 23-04-2019 Ku…
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka duhurnimo ee Radio Al-furqaan. Halkan Ka Degso Warka duhur 23-04-2019
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhageyso Warka Subaxnimo ee Radio Al-furqaan. Ku Degso Tayo Sare War subax 23-04-2019 Ku Degso Tayo Dhexe War subax 23-04-2019
cusmaan	 Apr 22, 2019 1
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan Ka Degso Dhuuxa wareysiyada 22-04-2019